सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एक्स कभर विनिमेय ब्याट्रीको साथ सुरू भयो Androidsis
सामसुले विनिमेय ब्याट्रीको साथ मोबाइल सुरूवात गर्‍यो, ग्यालक्सी XCover प्रो € 550० को लागि
ग्यालक्सी एक्सकोभर प्रो एक नयाँ सामसु mobile मोबाइल हो जुन ब्याट्रीको लागि हड्ताल हो जुन अर्को द्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। एक समयमा जहाँ केहि यो सम्भावना छोड्दछ, सामसु पेशेवरका लागि समर्पित फोनको साथ देखा पर्दछ जुन कठोर वातावरण भन्दा बढीमा हुन्छ।
सामसु fromबाट यो नयाँ फोन, र यो चुपचाप शुरू भयो र हामीले उहाँ बारे केही घण्टा अघि कुरा गर्यौं, XCover4प्रतिस्थापन गर्न आउँदछ जुन २०१ 2017 मा फिर्ता सुरू भयो। अधिक हालको डिजाइनको फोन र त्योसँग एक २०.6,7 अनुपातको साथ 20 ″ स्क्रिनको साथ.
वातावरण जहाँ पेशेवरहरु मा पेशेवरहरु को लागी एक मोबाइल उनीहरू रमाईलो दिन बिताउन उत्तम छैनन् र योसँग पर्याप्त सुरक्षा छ कि यसले वार र अन्य विविध परिस्थितिको सामना गर्न सक्दछ।
त्यो विनिमय ब्यटरीको बाहेक, यससँग पानी र धुलोसँग प्रतिरोधको साथ आईपी certific68 प्रमाणीकरण छ, र तपाइँले बोक्नको लागि यससँग धोखा दिन सक्नुहुन्छ। मिल- STD-810 सैन्य मानक प्रमाणीकरण यसको स्थायित्व र मजबुतताको लागि।
Glo.6,7 इन्च स्क्रीनको बाहेक, जुन ग्लोभमा अपरेट गर्न सकिन्छ, ग्यालक्सी XCover प्रोमा ए छ Exynos 96114१११ चिप सामसु fromबाट, GB जीबीको र्याम र GB 64GB आन्तरिक भण्डारण। एक पेशेवर को दैनिक कार्यहरु को लागी पर्याप्त भन्दा बढी।
क्यामेरा को रूप मा, मा पछाडिको दुईवटा कन्फिगरेसन छ २MP MP चौडा कोण लेन्स र MMp अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्सको साथ। मोर्चामा, उसले ती सेल्फिहरूको लागि १MP एमपी राख्छ।
यसको एउटा जिज्ञासु विवरण हो यसका दुई भौतिक बटनहरू जुन प्रोग्राम गर्न सकिन्छ यसलाई फ्ल्यास प्रकाश मोडमा प्रयोग गर्नको लागि फ्ल्यास प्रकाश बन्द वा बन्द गर्न, वा हाम्रो आवाज प्रयोग गरेर पाठ सन्देशहरू सिर्जना गर्न। योसँग सामसु K्ग नोक्स पनि छ र एन्ड्रोइड has पनि छ।
El सामसु Galaxy ग्यालेक्सी XCover प्रो फेब्रुअरी मा यूरोप मा उपलब्ध हुनेछ 500 युरो को नजिक मूल्य मा। यदि तपाइँ एक प्रतिरोधी चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले के गर्नु अघि नै थाहा छ र त्यो ग्यालक्सी S20 बाट अगाडि बढ्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » सामसुले विनिमेय ब्याट्रीको साथ मोबाइल सुरूवात गर्‍यो, ग्यालक्सी XCover प्रो € 550० को लागि
नयाँ "हेक्सागन" टाइपवाइज कीबोर्डको साथ छिटो टाइप गर्नुहोस्
सामसु'sको स्मार्टटिings् अनुप्रयोगमा million० मिलियन भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू छन्